एउटा यस्तो रोचक…महिलाको भित्री वस्त्र फोटो प्रतियोगिताका विजेता पुरुष !
एजेन्सी– रसियाको साक्हालिन ओब्लास्ट क्षेत्रका २० वर्षे ठिटोले महिलाको भित्री वस्त्र फोटो प्रतियोगिताका उपाधि बाजी मारेपछि समाचारको हेडलाइन बन्न सफल भए । उक्त प्रतियोगिता चर्चित स्टोरले आयोजना गरेको हो । एन्ड्रे नागार्नी, युज्नो–साक्लोलिन्स्कले आफ्नी प्रेमिकामार्फत उक्त फोटो प्रतियोगिताबारे थाहा भएको बताए । उनका महिलाको गुणसमेत भएकाले उनीहरुले महिलाले लगाउने केही
तपाईंजस्तै ठ्याक्कै अर्को व्यक्ति खोजिदिने भेटियो वेबसाइट
एजेन्सी– आफ्नो जस्तै अनुहार भएको व्यक्ति देख्दा निकै रोमाञ्चक अनुभव हुनसक्छ । साधारणतया सेलिब्रिटीले मात्र यस्तो मौका पाएका हुन्छन् किनभने उनीहरु जस्तै देखिने चाहना धेरैको हुन्छ र थोरै मेल खाँदा पनि उनीहरु चर्चामा आएका हुन्छन् । तर यदि कसैले चाहेको खण्डमा जोसुकैले आफ्नो डुप्लिकेट खोज्न सक्छन् । यसका लागि तपाईंलाई
आफ्नो ओच्छ्यानमा प्रेमिका अर्के पुरुषसँग भेटे, प्रेमीले गरे यस्तो..
अमेरिकाको टेक्सासका निवासी डस्टन होलोवेले आफूलाई धोका दिने प्रेमिकासँग नालो तरिकाले बदला लिएका छन् । केही कामले शहर बाहिर गएका डस्टनले आफ्नो प्रेमिकालाई सरप्राइज दिन उनलाई थाहा नै नदिइ घर आएका थिए । तर, त्यहाँ आफै आश्चर्यचकित बनेका थिए ।आफ्नो ओच्छ्यानमा प्रेमिका अर्के पुरुषसँग सुतिरहेको उनले भेट्याएका थिए । त्यसपछि
नयाँ शक्तिका उम्मेद्वार खोज्दा, आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिए १५ युवती नियन्त्रणमा लिन आदेश
नयाँ शक्तिका उम्मेद्वार मदन गिरी अपहरणमा परेको सूचना पाएसँगै प्रहरी उनको खोजिमा लाग्यो । गत बुधवार एकाएक गायव भएका गिरीको खोजीमा प्रहरीले बिहीबार राती काठमाडौंको गोंगवुमा रहेका होटल तथा गेष्ट हाउसहरुमा छापा मारेको थियो । ‘गिरीलाई कतै होटलमा बन्धक बनाएर राखिएको त छैन्’ भन्नै शंका बोकेर गोंगवु एरियामा पुगेको प्रहरी
नखानुहोस् यी औषधि, जसले तपाईको यौन जीवन नै समाप्त…
एजेन्सी- कतिपय यस्ता औषधि छन् जसले तपाईको यौन जीवनमा प्रभाव पारेको हुन्छ । जानिराखौँ यस्ता औषधिको बारेमा : – उच्च रक्तचापका औषधि : उच्च रक्तचापका औषधिले यौन जीवनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । ब्लड प्रेसरका लागि प्रयोग गरिने जस्तो क्लोनिडिन, अल्फा मिथाइल डोपर, ग्वानेथिडिन आदि यौन यच्छालाई कमी ल्याइदिन सक्छन् । बिटास्पेन, अल्फाबोटा,
विवाहको तीन घन्टामै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने दुलाहालाई लगाइयो जुत्ताको माला…
एजेन्सी- सामान्यतया विवाहपछि प्रायः जोडीको रमाइलो दाम्पत्य जीवन सुरु हुन्छ। तर, भारतका एक दुलाहालाई भने नवदुलहीले तीन घण्टामा नै सम्बन्धविच्छेद गरिदिएकी छिन्। लोभी दुलाहाले धेरै दाइजो मागेपछि सिन्दुर हालेको तीन घण्टामै दुलहीले सम्बन्धविच्छेद गरेर अर्को पुरुषसँग विवाह गरेकी हुन्। दाइजोको विषयलाई लिएर बेहुलीपक्षले दुलाहाको आधा कपाल मुन्डन गरी जुत्ताको माला
गर्भवती महिलाले यस्तो गरेपछि… (हेर्नुहोस् तस्वीर)
कस्तो आश्चर्य ! गर्भावस्थाकै बेला फेरि गर्भवती..
एजेन्सी- मानवजातिको इतिहासमा यस्ता घटना विरलै भएका छन्, कि कुनै महिला गर्भवस्थामा फेरि गर्भवती होउन् । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार १०० वर्षको अवधिमा यो छैटौं घटना हो । पछिल्लो समय एक बेलायती महिला गर्भवस्थामै रहेका बेला फेरि गर्भवती भएकी छन् । उनका अनुसार उनको गर्भमा जुम्ल्याहा बच्चा थिए । तर केही
यो कस्तो ठाउँ ! जहाँ विवाह नहुँदै गर्भवती हुने युवतीलाई मर्नका लागि टापुमा छोडिन्छ…
एजेन्सी – युगान्डामा अविवाहित युवती गर्भवती भएमा सबै भन्दा कठोर सजाय दिने गरिन्छ। मर्नका लागि उनीहरुलाई एक विरानो टापुमा लगेर छोड्दिने परम्परा छ। जस मध्ये थोरै भाग्यमानी मात्र यस्तो अबस्थामा बास्न सक्छन्। यस्तो सजाय पाउँदा पनि बाच्न सफल एक युवती हुन्, माउदा कितारागाबिर्वे । जो १२ वर्षकै कलिलो उमेरमा गर्भवती भएकी
भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता…
मान्छेको मात्र होइन कुकुरको सौन्दर्य प्रतियोगिता भएको त सुनिएको थियो । तर पाकिस्तानमा चाहीँ भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता भएको छ ।भैँसीको नश्ल सुधारलाई बढावा दिनका लागि उक्त प्रतियोगिता भएको बताइएको छ । प्रतियोगितामा भैँसीको सुन्दरता तथा उसको दुध दिने क्षमता दुबैलाई ध्यान दिइएको थियो ।पाकिस्तानको उत्तरी स्वात जिल्लाको सदरमुकाम मिंगोरामा भएको